ဖြေရှင်းချက် "com.google.process.gapps လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရပ်တန့်သွားသည်" | Gadget သတင်း
Ignacio Sala | | မိုဘိုင်း, Software များ, လဲ tutorial
Android စျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်ကတည်းကအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်မှာပြtheနာတစ်ခုမှာ Apple ၏ iOS နှင့် iPhone ကဲ့သို့သောသီးခြားဟာ့ဒ်ဝဲအတွက်အထူးဒီဇိုင်းမထားသည့်အတွက်၎င်းသည်တပ်ဆင်ထားသည့်ကိရိယာများနှင့်လိုက်ဖက်ညီမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အခြားမည်သည့်အရာကမဆို၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကိုဗားရှင်းအသစ်များသို့အဆင့်မြှင့်သောအခါထုတ်လုပ်သူများရင်ဆိုင်ရသောအဓိကပြproblemနာဖြစ်သည် Android ဖုန်းများကို၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ရုံသာမကသို့သော်၎င်းတို့သည်စိတ်ကြိုက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောအလွှာတစ်ခုထပ်ထည့်ရမည်။
ဒါပေမယ့်ဒါတောင်မှကျွန်ုပ်တို့ terminal model အတွက်အပြည့်အဝအသုံးမပြုနိုင်သော Android version ကြောင့်ဒါမှမဟုတ် customization layer ကြောင့်တစ်ခုခုချွတ်ယွင်းနေတတ်သည်။ အသုံးအများဆုံးအမှားအယွင်းတစ်ခုမှာ application နှင့် terminal ၏လုပ်ဆောင်မှုနှစ်ခုလုံးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့အာရုံစိုက်မယ် အမှားပြင်ဆင်ချက် "com.google.process.gapps လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရပ်တန့်သွားသည်"အများအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို Google Play စတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ခွင့်မပြုသည့်အမှားတစ်ခု။
ဤအမှားသည် Android Kitkat 4.4.2 တွင်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဂူးဂဲလ်မှယောက်ျားများသည်သုံးစွဲသူများအားအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုရန်အားမပေးသောအဖြေကိုရှာဖွေရန်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ခဲ့ဟုထင်ရသည်။ ဤဆောင်းပါးကိုကျွန်ုပ်တို့ရေးသားသောအချိန်သည် Android 8.0 Oreo တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဆိပ်ကမ်းများစွာတွင်ထပ်တလဲလဲဖြစ်နေသောပြthanနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်တွင်သင့်အားဤပြproblemနာအတွက်ကွဲပြားသောဖြေရှင်းနည်းများပေးမည် ခပ်သိမ်းသောအချိန်တွင်အများဆုံးအကြီးအကျယ်ဖြေရှင်းချက်ကိုရှောင်ရှား အရာခဲယဉ်း device ကို resetting အပေါင်းတို့နှင့်၎င်း၏အကြောင်းအရာများကိုဖျက်ပစ်ပါဝင်ပါသည်။
1 ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြgivesနာဖြစ်စေသော application ၏ cache ကိုရှင်းပါ
5 Google Play ဝန်ဆောင်မှုများမှအချက်အလက်များကိုဖျက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြgivesနာဖြစ်စေသော application ၏ cache ကိုရှင်းပါ
အကယ်၍ သင် application တစ်ခုဖွင့်တိုင်းတိုင်းဤအမှားပုံမှန်ဖြစ်ပျက်ပါက၊ ခတ် စနစ်နဲ့ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည် အဲဒါကို၏ cache ကိုရှင်းလင်းပါ.
Application cache ကိုရှင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ Settings> Applications ကိုသွားပြီးသက်ဆိုင်ရာ application ကိုသာရွေးပါ။ ၎င်းကိုနှိပ်သောအခါအောက်ခြေသို့မသွားပါ Clear cache ကိုနှိပ်ပါ.
ပြtheနာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာတွင်ခဏတစ်ဖြုတ်တပ်ဆင်ထားသည့်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုတွင်တွေ့ရှိသောအခါ၎င်းသည်၎င်းတွင်ရှိနိုင်သည် ကျနော်တို့နောက်ဆုံး install လုပ်ပါပြီကံမကောင်းတာက Android မှာတော်တော်များများတွေ့ရလေ့ရှိတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းဖို့ပထမဆုံးလုပ်ရမယ် လျှောက်လွှာကို uninstallတိုက်ရိုက်၊ ချိန်ညှိချက်များ> အပလီကေးရှင်းများမှသော်လည်းကောင်း၊ ၎င်းလုပ်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့် Third-party application မှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေ။
အကယ်၍ application update ကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ပြီးကတည်းက၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားထို message ကိုပြသရန်စတင်လာပါကပြproblemနာကို၎င်းတွင်တွေ့နိုင်သည် နောက်ဆုံး update ကို ကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်ထားသော application ၏ပြproblemsနာများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာက updates များကို uninstall ဖြစ်သည်။
အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိန်ညှိချက်များ> အပလီကေးရှင်းများသို့ပြန် သွား၍ သက်ဆိုင်ရာ application ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထိပ်ဆုံးမှာ Force stop option ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် အသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုဖယ်ထုတ်ပါ။ နောက်ဆုံးထွက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်သည်နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်၏မည်သည့်သွင်ပြင်ကိုမဆိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သောအခါအစတွင်ရှိသကဲ့သို့၊
ကျနော်တို့အဆိုပြုထားသောနောက်ဆုံးအဖြေ, ဘာသို့မဝင်မီ ပြprobablyနာရဲ့အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် ၎င်းသည်တိုက်ရိုက်အပလီကေးရှင်းများနှင့်မသက်ဆိုင်ကြောင်း၊ သို့သော်စနစ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပလီကေးရှင်းများ၏ ဦး စားပေးမှုကိုပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ Application preferences ကိုပြန်လည်ရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Settings> Applications သို့သွားပြီး All tab ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် screen ရဲ့ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ menu ကိုသွားပြီးဒေါင်လိုက်အစက်သုံးခုပါ ၀ င်ပြီး select လုပ်ပါ ဦး စားပေးများပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအတည်ပြုခြင်းမပြုမီ၊ Android ကကျွန်ုပ်တို့အားမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုပြလိမ့်မည်။ ပိတ်ထားသည့် application အားလုံး၏ကြိုက်နှစ်သက်မှု၊ မသန်စွမ်းသောအသုံးချပရိုဂရမ်များအကြောင်းကြားစာများ၊ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်အသုံးချပရိုဂရမ်များ၊ အပလီကေးရှင်းအတွက်နောက်ခံအချက်အလက်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်ခွင့်ပြုချက်ကန့်သတ်ချက်များအားလုံးဖြစ်သည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ပြီးပြီ၊ ကျွန်ုပ်တို့အားပြproblemsနာများဖြစ်စေသောလျှောက်လွှာသည်မည်သို့ပြန်လည်အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရ ဦး မည် တစ် ဦး ချင်းစီသော setting များကိုထား လျှောက်လွှာတစ်ခုစီသည်တည်နေရာကိုရယူနိုင်သကဲ့သို့မိုဘိုင်းဒေတာ ...
Google Play ဝန်ဆောင်မှုများမှအချက်အလက်များကိုဖျက်ပါ
အကယ်၍ ယခင်ရွေးချယ်မှုများအားလုံးကိုကြိုးစားပြီးလျှင်၊ အရာအားလုံးသည်ပြtheနာသည်အပလီကေးရှင်းများ၌သာတည်ရှိနေခြင်းမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားပြသပုံရသည်၊ သို့သော်၎င်းကို Google Play ဝန်ဆောင်မှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ Google Play ဝန်ဆောင်မှုများသည် Android စနစ်သုံး application တစ်ခုဖြစ်သည် အားလုံး system applications များရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ် အမြဲတမ်းနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည့်အပြင်၎င်းတို့အားလုံးသည်အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းသို့အမြဲတမ်း update လုပ်ရန်သေချာသည်။
ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်၊ Google Play တွင်သတ်မှတ်ထားသည့် ဦး စားပေးမှုများနှင့်ချိန်ညှိချက်များကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည် ပုံသေဆက်တင်များကိုပြန်ယူနေသည်။ Google Play ဝန်ဆောင်မှုများမှအချက်အလက်များကိုဖျက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ချိန်ညှိချက်များ> အသုံးချပရိုဂရမ်များသို့ သွား၍ Google Play ဝန်ဆောင်မှုများကိုနှိပ်ပါ။ ထို့နောက် Storage ကဏ္ within အတွင်းရှိဒေတာများကိုဖျက်ရန်သွားပြီး၊ ဤအပလီကေးရှင်းမှအချက်အလက်အားလုံးကိုဖျက်ခြင်းကိုအတည်ပြုသည်။
ဤနည်းလမ်းများမှ com.google.process.gapps ပြproblemနာကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါကပြproblemနာမှာ၊ device ကိုလက်ခံရရှိနောက်ဆုံး update ကိုဒါကြောင့်အဲဒါကိုဖယ်ထုတ်ဖို့စက်ကို reset လုပ်ရပါမယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကိရိယာသည်စျေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာသည့်မူရင်း Android ဗားရှင်းသို့ပြန်သွားပါမည်။
စက်၏စက်ရုံပြင်ဆင်မှုများကိုပြန်လည်ရယူရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Settings> Backup နှင့် reset သို့ သွား၍ Factory data reset ကိုရွေးချယ်ရမည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်အသုံးချပရိုဂရမ်များသာမက terminal ထဲရှိဓာတ်ပုံများနှင့်ဒေတာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်။ ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သိမ်းထားလိုသည့်အချက်အလက်အားလုံး၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ရိုက်ကူးခဲ့သောဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမိတ္တူကူးရမည်။ နောက်ပိုင်းမှစ။ ကိရိယာနှင့်အတူ သူတို့ကိုပြန်ရဖို့လမ်းမရှိလိမ့်မည်aposteriori, ငါတို့စမ်းသပ်ကြောင်း applications များအဘို့။
ဤမိတ္တူကူးယူရန်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာaကိုရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်သည် မှတ်ဉာဏ်ကဒ် ကိရိယာကိုတင်ပြီးရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအပြင်ငါတို့သိမ်းဆည်းထားလိုသည့်ဒေတာအားလုံးကိုရွှေ့ပါ၊ ၎င်းစက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လာသောအခါ၎င်းတို့ကိုပြန်လည်လက်လှမ်းမီစေရန်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » တယ်လီဖုန်း » မိုဘိုင်း » "com.google.process.gapps လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရပ်တန့်သွားသည်" အမှားကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဒီအမှားကိုရပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကကျွန်ုပ်ကိုချိန်ညှိချက်များ (သို့) ဘယ်နေရာမှာမှတောင်ဝင်ခွင့်မပြုပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မက်ဆေ့ခ်ျကထပ်မံပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ဆက်တင်များရှိပါက၊ ဆက်တင်များရပ်တန့်သွားပြီး…။ ဒါကြောင့်ဒီဖိုရမ်မှာမင်းပေးတဲ့အဖြေကငါနဲ့မထိုက်တန်ဘူး မည်သည့်ရွေးချယ်စရာကိုမှမလိုဘဲစက်ရုံတက်ဘလက်ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ပုံသေနည်းတစ်ခုရှိပါသလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဟာအခြားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုမမြင်ရဘူး ... မင်းသိရင်မင်းငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတန်ဖိုးထားမှာပါ
ငါယခင်မှတ်ချက်နှင့်အတူသဘောတူ, သူတို့ပေးသောရှင်းပြချက်ယုတ္တိမတန်ပင်ဖြစ်ပါသည်, ပြtheနာကလျှောက်လွှာကိုရပ်တန့်သောကြောင့်, သူကဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမပေးပါဘူးလျှင်, တက cache ကိုဒေတာကိုဖျက်ပစ်ရန်ဘယ်လိုထည့်သွင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာသင်ပြောအဘယ်အရာကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်, လျှောက်လွှာတစ်ခုစီကအတူတူပဲ၊
ငါယခင်မှတ်ချက်နှင့်အတူသဘောတူ, သူတို့ပေးသောရှင်းပြချက်ယုတ္တိမတန်ပင်ဖြစ်ပါသည်, ပြproblemနာကလျှောက်လွှာကိုရပ်တန့်သောကြောင့်, သူကဝင်ရောက်ခွင့်ကိုမပေးပါဘူးသောကြောင့်, သူက cache ကိုဒေတာကိုဖျက်ပစ်ရန်ဘယ်လိုထည့်သွင်းပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ကပြောရာကိုစိတ်ပျက်ဖွယ်ဖြစ်ပါသည်လျှင် လျှောက်လွှာတစ်ခုစီသည် mmmmm အတူတူပင်ဖြစ်သည်